नेपाली जनतामा खुशी ल्याउँछौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बास्कोटा ( अन्तरवार्ता) | Ratopati
नेपाली जनतामा खुशी ल्याउँछौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बास्कोटा ( अन्तरवार्ता)
यो सरकारले पर्याप्त उत्साह भरेको छ तर के छभन्दा सरकारले गरेको कामको परिणाम आजको भोलि नआउने भएकाले केही धैर्य चाहिने र केही समय लाग्ने देखिन्छ । हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र पनि विधि पु¥याउने मानसिकताबाट चलेको हुनाले र यसबीचमा व्यवस्थापकीय सङ्क्रमणको कारणले कर्मचारीको समायोजनले केही समय खायो । हामी काम गर्दैथ्यौँ, विपक्षी आरोप लगाउँदै थियो । कामभन्दा आरोपको स्वर नै ठूलो भयो । विशेष गरी सोसल मिडियाले पनि नकारात्मकताको खेती मच्चाएर लग्यो ।
मैले भन्दै आएको छु कम्युनिष्ट विरोधी ‘फोबिया’का केही माध्यम छन् । माध्यम नै त नभनौँ । माध्यम आफैँमा त्यस्तो हुँदैन । केही व्यक्तिहरु छन्, मिडिया क्षेत्रमा । उनीहरु कम्युनिष्टको ‘क’ पनि सुन्न चाहँदैनन् । उनीहरु यति पनि सत्य बुझ्दैनन् कि यो कम्युनिष्ट पार्टीको शासन होइन, कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको शासन हो । उनीहरु यति पनि बुझ्दैनन् र हरेक कुरालाई नकारात्मक प्रचार गर्छन् । मैले अघि नै भनिसकेँ, उनीहरु इतिहासको रङ्गमञ्चबाट फालिएका छन् । उनीहरुलाई पाँच वर्ष कुर्न पनि गाह्रो भएको छ । उनीहरु अधैर्यशील भए । हामीलाई थाहा छ यो सरकार जननिर्वाचित सरकार हो । पाँच वर्षपछि पनि हामी जनताको बीचमा जानुपर्छ । त्यतिखेर पनि हामी प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ । हाम्रा प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गर्ने काम कुनै बल प्रयोगले होइन, हाम्रा काम र विश्वासका आधारमा जनतालाई विश्वासमा लिएर हामी गर्न सक्छाँै । यो हाम्रो दृढता हो ।
समाजलाई स्वतन्त्रता चाहिन्छ । स्वतन्त्रताको कुनै सीमा हुँदैन तर मर्यादाको सीमा हुन्छ । मान्छे स्वतन्त्रताका निम्ति लड्दै आएको छ तर मर्यादा हुन्छ कि हुँदैन ? कुनै पनि समाजको मर्यादा हुन्छ कि हुँदैन ? भारतमा रक्सी किन्नुप¥यो भने बाबुको नाम, रक्सी पिउने मान्छेको नाम राख्छ कि राख्दैन ? त्यो अनुशासन होइन ? अमेरिकामा १८ वर्ष नपुगी रक्सी किन्न पाइँदैन । त्यो केही भएन । त्यो तानाशाही भएन, निरङ्कुशता भएन । यहाँचाहिँ १२ बजेपछि रक्सी खान पाइँदैन भन्यो भने ‘कम्युनिष्ट सरकार’, ‘दुइतिहाइको सरकार निरङ्कुश’ भयो भनिन्छ । मान्छे बाटामा गएर लडेको हुन्छ ।
त्यसम्बन्धी कानून आइसक्यो त । ‘ह्याकिङ’ गर्ने, बैंकिङ कसूर गर्ने, साइबर क्राइम गर्नेलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । साइबर सेक्युरिटी केन्द्र शुरु भइसकेको छ । डाटा सेन्टर स्थापना भएको छ । कहाँबाट हमला भइरहेको, छ कहाँबाट ‘ह्याकिङ’ भइरहेको छ, त्यो थाहा पाउने प्रविधि जडान भइसकेको छ । इमेल निर्देशिका हामीले बनाएर कार्यान्वयन गरिसकेका छौँ । डाटा रिकभरी सेन्टर हेटाँैडामा खोलिएको छ । यी त भएका काम हुन् नि । पत्रकारसँग सम्बन्धित दुईतीन वटा कानून आए । पत्रकारका लागि रु पाँच करोडको कोष स्थापना भएको छ । अरु गफ गरेर हिँडेका थिए । लामो समय सरकार चलाएकाले स्वतन्त्रताको गफ छाँटेकै थिए । हामीले व्यवहारमा नै देखाएका छौँ । विज्ञापनसम्बन्धी कानून त संसद्बाट पास नै भइसकेको छ । त्यसले ‘क्लिन फिड’ को कुरा ल्यायो जसबा मिडिया थप बलियो बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सूचना महामार्गको काम शुरु भइसकेको छ । प्रदेश १, २ र ३ को नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा लगाइसकेका छौँ । गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ को ठेक्का भएर पनि काम हुन सकेको छैन, त्यो दुःखद् छ । युटिएलले गरेको काम नभएर दुई वर्षदेखि ‘पेन्डिड’ र ‘होल्डिड’मा छ । त्यसलाई परियोजना फिर्ता लिएर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्नेछ । कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि काम राम्ररी भएको छैन, विधि र प्रक्रिया पु¥याएर नयाँ तवरले काम शुरु हुन्छ । यसै वर्ष बुटवल र विराटनगरमा ‘इन्टरनेट एक्सचेञ्ज सेन्टर’ स्थापना गर्ने तयारीमा छौँ । डाटा सेन्टर काठमाडौँ, इटहरी र नेपालगञ्जमा राख्छौँ । कर्णाली प्रदेश र २ नं प्रदेशमा ‘ब्रोड व्याण्ड इन्टरनेट’ पु¥याउने कुरा करीब करीब अन्तिम चरणमा छ । टेलिकमको फोर जी परियोजना पनि अगाडि बढेको छ । नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा आगामी कात्तिकसम्म २५ वटा प्रमुख शहरमा पु¥याउँदै छौँ । आगामी वैशाख/जेठभित्र यो परियोजना सम्पन्न गर्र्छांै ।